Ny Fanjavozavoan’ny Tsipika Manasaraka ny Fialam-boly Amin’ny Politika ao Shina sy Taiwan · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Janoary 2016 9:27 GMT
Chou Tzuyu mpihira ny K-pop, 16 taona, mamaky ny fialan-tsininy. Pikantsary avy amin'ny YouTube.
Ny lahatsoratra orizinaly mitondra ny lohateny hoe “Ny Raharaha Chou Tzuyu sy ny Habaka Fanalana Hamohamo Ifandirana Momba Ny Fanondroam-Pirenena” dia nosoratan'i Brian Hioe ary nivoaka voalohany tao amin'ny New Bloom tamin'ny 19 Janoary. Ity lahatsoratra voahitsy ity dia navoaka indray tato amin'ny Global Voices noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Nisy lahatsary iray ahitana an'i Chou Tzuyu, Taiwaney 16 taona mpihira K-pop malaza amin'izao fotoana izao, nalaza tampoka tao Taiwan andro iray mialoha ny fifidianana ho filoham-pirenena 2016 tao amin'ny firenena. Tao amin'ny lahatsary i Chou no nanao fialan-tsiny tamin'ny lahatsary an-tserasera iray nahitana azy nitazona ny sainan'ny Repoblikan'i Shina—anarana ahafantarana an'i Taiwan eo amin'ny sehatra iraisampirenena.
Ilay hetsika dia nadikan'ny Shinoa mpiseraseran'ny Tanibe ho manohana ny fahaleovantena Taiwaney, izay tsy zakan'ny any amin'ny Shina tanibe. Heverin'i Shina ho zaratany tafasaraka i Taiwan hatramin'ny nisian'ny ady an-trano shinoa tamin'ny faramparan'ny taona 1940, raha niafina nankao amin'ny nosy ny hery resy tosika tao Kuomintang. Taloha, nandrahona i Beijing fa haka an'i Taiwan indray izy raha mitady hametraka amin'ny fomba ofisialy ny fahaleovantenany efa nipetraka ho azy.
Ho setrin'ny fiampangana dia nanao fialan-tsiny tao amin'ny lahatsary i Chou, nampivoitra fa Shinoa izy ary iray tsy mivaky i Shina. NIvoka tamin'ny 15 Janoary, andro iray alohan'ny handehanan'ny Taiwaney handrotsa-bato hifidy ny filohany manaraka, ny lahatsary.
Ny olona voalohany niampanga an'i Chou ho manohana ny fahaleovantena Taiwaney dia ilay mpampanala voly iray malaza antsoina hoe Huang An. Mitovy amin'i Chou, mpihira sy teratany Taiwan, i Huang. Saingy efa naka ny zom-pirenena Shinoa izy avy eo ary monina ao Shina amin'izao fotoana izao.
sary namboarina hita amin'ny aterineto mampitaha an'i Chou amin'ny takalon'ainan'ny ISIS. Lahatsoratra farany ambony: “Terena hiala tsiny, terena ho Shinoa. Androany i Tzuyu, rahampitso ianao.” Sary avy amin'i Nagee mpisera Facebook.
Na dia nisedra valibontana antserasera sasantsasany ho mihemotra amin'ny mari-panondroana maha-Taiwaney azy aza ny fialan-tsinin'i Chou tamin'ny voalohany, dia nisy ny onjam-panohanana azy ary nanaraka izany ny fitsikerana an'i Huang An.
Jerena ho toy ny lasibatra iray terena hiala tsiny ilay tanora, miaraka amin'ny sary an-tserasera iray namboarina mampitaha an'i Chou amin'ny takalon'ainan'ny ISIS terena hiteny eo anoloan'ny fakantsary sy voambana basy. Ny lahatsarin'i Chou ihany koa dia nampitahaina tamin'ny lahatsarin'ireo mpivaro-boky ao Hong Kong nanjavona. Vao haingana i Gui Minhai no nivoaka tao amin'ny televizionam-panjakana Shinoa nilaza fa nitolo-batana tamin'ny manampahefana ny tenany noho ny trangan-[dozam-pifamoivoizana] nandonany olona sy nandosirany fa nahafatesany olona. Nanjavona avy any Thailandy i Gui volana vitsivitsy lasa izay ary maro amin'ireo Shinoa ampitan-dranomasina no mieritreritra fa nalain'ny polisin'ny Tanibe Shinoa ankeriny izy noho ny namoahany boky mitsikera ny Antoko Komonista Shinoa.
Ny herin'ny tsena shinoa
Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay dia maromaro ihany ireo Taiwaney mpampiala voly no nilaza tena ampahibemaso ho Shinoa mba hahafahany miditra amin'ny tsena Shinoa. Mazava dia mazava ny mpanetsika ara-sôsiôekonimika mahatonga ireo mpampiala voly ireo manao izany, rehefa hita fa goavana mihoatra noho ny tsena taiwaney ny tsena shinoa.
Mazava fa mpanjifa goavan'ny K-pop ihany koa ny tsena shinoa. Araka ny tati-baovao dia noteren'ny Koreana mpitantana ny talentany hiala tsiny i Chou, natahotra ireo mpitantana ireo fandrao voarara tsy hahazo hiditra amin'ny tsena shinoa i Chou sy ny tarika K-pop misy azy antsoina hoe Twice.
Aorian'izany rehetra izany dia tsy ny valibontana ihany no mety ho azo amin'ny fanohanana ny fahaleovantena Taiwaney na ny ankivy ataon'ny vahoaka, fa mety horaran'ny fitondram-panjakana shinoa ihany koa izany tsy hahazo hiditra any Shina intsony. Tsy mahazo miditra any Shina izao ilay Taiwaney mpihira mitana ny laharana voalohany, A-Mei, noho ny nihirany tamin'ny fanokanana ilay Filoha Taiwaney mpanohana ny fahaleovantena Chen Shui-Bian. Tahaka izany ihany koa i Freddy Lim, lohalaharana ao amin'ny tarika heavy metal antsoina hoe Chthonic ary vao napetraka ho mpanao lalàna tamin'ny fifidianana farany indrindra teo tao Taiwan, dia voarara tsy hahazo hiditra an'i Shina noho ny fanohanany ankarihay ny fahaleovantena Taiwaney amin'ny alalan'ny hira.
Fampidirana politika ny fialam-boly
Raha ny tena marina, amin'ity raharaha Chou ity, dia tsy raisina ho fitondranteny amin'ny fahaleovantena Taiwaney ny fanofahofana ny sainan'ny Repoblikan'i Shina ao Taiwan. Tsy maka mari-panondroana amin'io saina io ireo mpanandra-tenin'ny fahaleovantena Taiwaney, izay mijery ny Repoblikan'i Shina ho fitondram-panjanahantany nohafaran'ny Kuomintang rehefa resin'ny Antoko Komonista Shinoa ry zareo tamin'ny 1949.
Nahazo adi-hevitra teo amin'ny mpiara-belona ny lahatsarim-pialan-tsinin'i Chou Tzuyu, izay nivoaka iray andro talohan'ny fifidianana ho filoham-pirenena. Ny marina, ireo kandidà telo mifaninana ho filoha ao Taiwan dia te-hananteny amin'nity raharaha ity ary maneho ny tsy fankatoavany ny natao tamin'i Chou. Eny fa na ny kandidàn'ny fampiraisana (amin'i Shina) ao amin'ny Kuomintang antsoina hoe Eric Chu aza dia naneho fangorahana an'i Chou ary miantso azy hody ao Taiwan.
Maro ny mijery ny raharaha Chou Tzuyu ho fanangolena ny fihetseham-pon'ny daholobe hanohitra ny Kuomintang sy singa nahatonga ny faharesen'ny antoko tsy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ihany fa tamin'ny fifidianana antenimiera ihany koa.
Misy aza moa ireo sasany nametraka fa mety nahatonga olona maro kokoa hody sy handrotsa-bato ho an'ny mpanohitra ao amin'ny Antoko Liampandrosoana Demôkratika ity raharaha ity ho fihetsika fanamafisana ny mari-panondroana nasionaly maha-Taiwaney.
Nanjary nampiditra politika ny fandraharahan'ny fialam-boly aza ny raharaha. Raha terena hanonona an'i “Shina tokana” ampahibemaso ireo Taiwaney mpihira sy mpiantsehatra te-hiditra any Shina, dia miatrika valy bontana any an-tanindrazana. Ohatra, nirehitry ny fahatezerana amin'ilay kintan'ny pop Show Luo, ireo Taiwaney mpiserasera noho ny filazan'io mpihira io nandritra ny lanonam-panomezana amboara tao Beijing fa “Shinoa avokoa isika rehetra.” Nisy aza moa ireo nandrisika azy haka ny zom-pirenena shinoa tahaka ny nataon'i Huang An.
Rahatrizay, afa-maminavina isika fa hipoitra bebe kokoa any amin'ny vaovao politika ny vaovaom-pialam-boly satria lasa kianjan'ny fanehoam-pitolomana hiarovana sy ikolokoloana ny mari-panondroam-pirenena Taiwaney ity sehatr'asa ity.